injini zvigadzirwa Factory - China injini zvigadzirwa Vagadziri, Suppliers
Semugadziri wetiraki turakita anogadzira muChina, isu paYTO tinokwanisa kugadzira matirakiti akasiyana-siyana, aine simba kubva ku18 kusvika ku500HP, Zvinoenderana nemamiriro ayo ekutyaira, turakiti revhiri rinogona kuve rakakamurwa kuva 2WD trekita uye 4WD trekta. Neinjini yaanoshandisa, iyo tirakiti yetiraki inonyanya kusanganisira 2 cylinder trekita, 3 cylinder trekita, 4 cylinder trekita uye 6 cylinder trekita. Zvinoenderana nemashandisirwo azvo, trekita inogona kukamurwa mumapurazi ...
YTO SIMBA inopa yakakwirira-yemhando yedizili moto uye pombi yemvura yakagadzirirwa macusomers edu nemaini-anozvinjini enjini, yedu moto uye pombi yemvura set inogona kusangana neAustralia, Middle East neEuropean standard, tinogona kuita kuti pombi yakaiswa zvichiteerana neCustomer inokosha. Yedu akateedzera dhiziri pombi yakakodzera maindasitiri uye emadhorobha mvura, mvura yekudiridzira, uye inoshandiswa zvakanyanya pakurima yekudiridza, yekufambisa yakachena mvura kana zvimwe zvinwiwa izvo zvemuviri nemakemikari zvakasikwa akafanana nemvura yakachena. F ...
Kuungana uye Kuedza: 1.First-kirasi musangano mutsara 2.Atlas Copco Zvishandiso uye Sangano System. 3.AVL dizeli injini yekubatanidza kuongorora system 4.Diesel injini yekuongorora mamiriro 5.Advanced kuongororwa uye control Center 6.Nature gasi injini yekuongorora mamiriro YTO SIMBA inopa yakakwirira-mhando YANGDONG uye YTO yakateedzera dizeli jenareta sets, simba rang fomu 10kva kusvika 500kva, ine vhura mhando uye chinyararire mhando, 50HZ uye 60HZ. Zvakanakisa uye Zvimiro 1.Self-inogadzirwa injini kuti ive yevimbiso yemhando yakavimbika, Hukuru kukosha kwe ...